Archive du 20170920
Lalao Ravalomanana An-dalana ny fanesorana azy…
Afaka nihetsika sy nitokona an-kalalahana ary nilahatra an-dalambe nitety an’Antananarivo Renivohitra ireo Taksi mivondrona eo anivon’ny FTAR izay tsy mankasitraka ny hanatanterahana ny “contre visite” eny amin’ny OMAVET.
Pastera Randriamisata Roger “Tsy misy demokrasia eto !”
Nahitsy fiteny ary hentitra i Pastera Randriamisata Roger nandritra ny fandaharana Donak’afo tao amin’ny TOP Radio halina, nilaza fa “tsy misy demokrasia izany eto !”. Sakantsakanana ny olona haneho hevitra, tsy avela hidina an-dalambe toy ny fahita amin’ny tany demokratika manerantany. Hatramin’ny olona maneho hevitra any amin’ny haino aman-jery aza samborina. Ny manahirana dia misy ampahan’olona na sokajin’olona omena tombondahiny fa ny ankamaroany dia ailikilika, anaovana antsojay. Manampy trotraka izany ny fanapepoana ny olona amin’ resaka “laïcité de l’Etat” na ny fanasarahana ny fitantanam-panjakana amin’ny raharaham-piangonana.
Rakoto Andrianirina Fetison “Hajao ny fitsipika demokratika”
Mampiseho ny fahalemen’ny fitondrana ankehitriny hiatrika ireo fifidianana lehibe hifandimby ny filana hanova ny fitsipi-dalao, hoy Rakoto Andrianirina Fetison raha naneho ny heviny mahakasika ny hanovana na tsia ny lalàna fototra ankehitriny.
Lalàmpanorenana Ny finiavana hampihatra no tsy misy
Misokatra tanteraka ny adihevitra momba ny fikitihana ny Lalàmpanorenana Malagasy natao amboletra tamin’ny taona 2010. Tsy misy ratsy ny didy aman-dalàna eto Madagasikara.
Taksi tsy mila OMAVET Mamaky ady amin’ny Kaominina
Nanatanteraka fitokonana faobe ireo fiarakaretsaka sasany mivondrona ao amin’ny FTAR ( fikambanan’ny Taksi eto Antananarivo Renivohitra) tarihin-dRaharinirina Clémence omaly talata 19 septambra.
Diovy ny kajy !
Hatramin’izao rehefa miresaka politika eto Madagasikara dia zary lasa loto hatrany no ao an-tsain’ny maro.